Wararka - Meesha ugu muhiimsan ee tikniyoolajiyadda wax yar baa ka dambeeya, kororka warshadaha bamka waddankeyga wax badan ayaa harsan
In muddo ah, horumarka warshadaha bamka waddankeyga ayaa ku socday horumar iyo soohdin. Waxaa hogaaminaya siyaasadaha wax soo saarka wanaagsan ee dalka, baaxadda warshadaha iyo heerarka farsamo labadaba si weyn ayaa loo hagaajiyay iyada oo loo marayo habab badan sida nuugista, cusboonaysiinta iyo isbeddelka, iyo dheefshiidka iyo hal-abuurnimada. Gaar ahaan, heerka wax soo saarka lagu taageerayo qaar ka mid ah tiknoolajiyada waaweyn iyo qalabka wax lagu barto ayaa gaadhay heerka hoggaaminta caalamiga ah.
Waxaa la fahansan yahay iyadoo la raacayo hagida baahida suuqa, badeecadaha mashiinka sare ee wadankeyga sida bambooyin cadaadis baaxad leh leh oo leh xuquuq madax-bannaan oo aqooneed ayaa sameeyay awood ku filan oo muhiim ah oo ku aaddan dhinacyada korantada, metallurgy, petrochemicals, iyo ilaalinta deegaanka. Iyo dib-u-habeynta qaabdhismeedka dhinaca saadka iyo hagaajinta heerka farsamo guud ahaan, xoogga guud ee warshadaha bamka waddankeyga ayaa si weyn u soo gaabiyey farqiga u dhexeeya dalalka horumaray.
Ka dib markii la galay "13-ka Shanta Sano ee Qorshaha", hirgelinta tas-hiilaadka injineernimada baaxadda weyn ayaa la dedejiyay, iyo ilaalinta tamarta iyo yaraynta qulqulka meelaha muhiimka ah waxay noqotay mid ka mid ah diiradda shaqada. Dagaalkii difaaca cirka ee buluugga ahaa, ka hortagga iyo xakamaynta wasakhda biyaha, iyo xakameynta biraha culus ayaa si qoto dheer u horumarsan, iyo hannaanka ka hortagga iyo xakamaynta wasakhda ayaa si xoog leh kor loogu qaaday. Muhiimadda warshadaha bamka ayaa is muujiya.
Xogta ayaa muujineysa in baaxadda suuqa ee warshadaha bamka waddankeyga ee 2017 ay gaarayeen ilaa 170 bilyan. Tirakoob aan dhammaystirnayn ayaa muujinaya inay jiraan ku dhowaad 7,000 shirkadood oo matoorro soo saara oo waddanka oo dhan ah iyo in ka badan 1,000 shirkadood oo ka sarreeya cabbirka loo qoondeeyey. Iyada oo halsano wanaagsan oo ka mid ah siyaasadaha qaran iyo kuwa maxalliga ah, rajooyinka mustaqbalka ee warshaduhu ma ahan kuwo cajiib ah.
Horumar deg deg ah, dareenka dunida oo dhan caan ka ah, guulaha muuqda words Erayadan ammaanta ah waxaa si habboon loogu isticmaalay warshadaha matoorka ee waddankeena, laakiin ka dambeeya ubaxyada ubaxaya, sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin aan la iska indhatiri karin.
Marka hore, tirada SMEs aad ayey u badan yihiin. In geeddi-socodka horumarinta degdegga ah ee warshadaha bamka, shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee matoorka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee matoorrada soo saara ayaa marba marka ka dambaysa soo ifbaxayay, waxayna ku fadhiyaan qayb weyn oo ka mid ah tirada guud ee shirkadaha matoorka. Waxaa jira shirkado waaweyn, oo sumadda iyo nuxurka shirkadaha yaryari ma xoogsana, taas oo aan ku habboonayn horumarka guud ee warshadaha bamka.
Marka labaad, urursiga suuqa ayaa hooseeya. Iyadoo ay hoos u dhacday dalabkii suuqa iyo sahay ku filan, warshadaha bamka waddankeyga waxay sii wadaan inay bislaadaan, laakiin awoodda suuqa ee 100 bilyan yuan ayaa diyaar u ah inay socoto. Marka la barbardhigo baaxadda weyn ee suuqa, urursiga suuqyadu wuu hooseeyaa, oo iibka sannadlaha ah ee shirkadda ugu weyn ayaa ka yar 10 bilyan ama xitaa in ka yar 5 bilyan. Sidaa darteed, waxaa jira baahi degdeg ah oo lagu kordhinayo urursiga suuqa.
Tan saddexaad, iyadoo la raacayo tilmaamaha istiraatiijiyadeed ee dalka ee "hordhaca, dheef-shiidka, nuugista, iyo hal-abuurnimada", warshadaha matoorrada waddankeyga runtii wax yar ayey ka faa'iideysteen. Si kastaba ha noqotee, howlaha dhabta ah, shirkado badan ayaa u muuqda inay soo bandhigaan Waxaa jira xitaa kuwa yar, taas oo ka dhigaysa horumarka warshadaha bamka waddankeyga inay ku dhacaan goobo la yaab leh. Ma jiraan tiknoolajiyado badan oo yar oo leh xuquuq madax-bannaan oo aqooneed.
Guud ahaan marka laga hadlayo, inkasta oo inta badan qaybaha wax soo saarka ee warshadaha bamka dalkeyga ay gaareen wax soo saar iyo wax soo saar madaxbanaan, waxaa jira qaybo wax soo saar yar oo leh xuquuq madaxbanaan oo aqooneed, iyo teknoolojiyad dheeri ah ayaa ku jirta gacanta dalalka horumaray, si shirkadaha matoorrada waddankayga waxay ku jiraan meel-hooseeya. Intaas waxaa sii dheer, cilladaha ka jira cilmi-baarista aasaasiga ah ee teknolojiyadda, horumarinta mashiinnada aasaasiga ah iyo waxyaabaha aasaasiga u ah warshadaha bamka waddankeyga ayaa dib u dhac ku yimid, taasoo caqabad weyn ku noqotay horumarka warshadaha, waxayna sidoo kale wajaheysaa halista ah in laga takhaluso. awoodda wax soo saarka gabowday. Sidaa darteed, kor u kaca warshadaha mashiinka ayaa leh waddo dheer oo loo maro. .